पछिल्लो समय सरकारसँग भित्रभित्रै वार्ता भइरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही प्रगति पनि भएको छ कि ?
– वार्ताभन्दा पनि यो… अनावश्यक बढी हल्ला भयो । सामान्य हिसाबले सरकारको तर्फबाट भेटघाट गर्न खोजेको चाहिँ बुझिन्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट औपचारिक हिसाबले न छलफल भएको छ, न उहाँहरुले छलफल गर्नुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा पनि यसबारे स्थायी समितिले पनि निर्णय गरेको छैन ।
सरकारले औपचारिकरुपमा वार्तामा आउनू भनेर बोलाएन भन्ने गुनासो पनि रहेछ नि.. त्यसैले हो ?
– … पत्र पनि आएको छैन । सञ्चारमन्त्रीले धम्कीपूर्ण भाषा मिडियामा बोलेको चाहिँ सुनियो । त्योभन्दा अरुचाहिँ पार्टीमा कुनै सूचना आएको छैन ।
सरकारले गठन गरेको सांसद् सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले पनि सम्पर्कको प्रयास गरेन ?
– त्यतिबेला त हाम्रो कुनै छलफल पनि भएन । कुनै पत्राचार पनि भएन । अनौपचारिक रुपमा हाम्रा केही साथीहरुलाई उनीहरुले सामान्य खबर पठाएको र भेट्न पठाएको भन्नेसम्म हामीले सुन्याैं । तर, औपचारिक हिसाबले उहाँहरुले हामीलाई वार्ताका निम्ति आह्वान गर्नुभएको थिएन । पत्र पनि पठाउनुभएन । त्यतिवेला पनि अहिले पनि त्यस्तो केही सरकारले गरेको छैन ।
पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग जेलमै छलफल भइरहेको रहेछ नि.. ?
हनु सक्छ । उहाँलाई भेटेको कुरा हामीले मिडियामा सुनेको हो ।
तपाईंहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको नीति छैन भन्नुभएको थियो । तर, भोजपुरमा पार्टीका एकजना नेताले चलाएको पेस्तोलको गोलीबाट प्रहरी जवानको मृत्यु भयो । अब नीति परिवर्तन भएको हो ?
हाम्रो नीति प्रतिवर्तन भएको होइन । हाम्रो आक्रमणको नीति होइन, रक्षाको हो । आक्रमण गर्न आयो भने रक्षा त हामीले गर्ने नै भयौं । जस्तै- महिलालाई बलात्कार गर्न आयो भने महिलाले प्रतिरोध गर्दा बलात्कारी पनि त मर्छ नि । हो, त्यही प्रकारले सुरक्षाकर्मीहरु हामीमाथि आक्रमण गर्न आएपछि हामीले प्रतिरक्षा गरेको हो ।
सरकारसँग वार्ताका लागि तपाईंहरुको सर्त के हो ?
हाम्रो अहिले त्यस्तो कुनै ठोस सर्त चाहिँ छैन । तर, पार्टीको प्रतिबन्धपछिको नीति के हो भने सरकारले प्रतिबन्धलाई खारेज गर्नुपर्‍यो । हाम्रा नेता, कार्यकर्ता जो राजबन्दीका रुपमा जेलमा परेका छन्, उहाँहरुलाई छाड्यो भने, दमन र धरपकड बन्द गरेर खुला राजनीतिक वातावरण तयार पार्‍यो भने वार्ताको वातावरण तयार हुन्छ । साथसाथै, वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक पत्र पठायो भने वार्ताबाट सकेसम्म पछि नहट्ने भन्ने पार्टीको नीति छ ।
राजनीतिक एजेण्डासहित औपचारिक वार्ताको प्रस्ताव राज्यबाट आयो हामी पछि नहट्ने भन्ने छ । तर, अहिले हाम्रो पूर्वशर्तका रुपमा यो-यो गरेपछि वार्ता गर्छौं भन्नेचाहिँ कार्यसूची पार्टीले तयार गरिहालेको छैन । किनभने, उसले भन्ने वार्ता अनौपचारिक हिसाबले हो ।
तर, हाम्रा साथीहरुलाई हत्या गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र हामीमाथि दमन गर्ने गतिविधि भएकाले सरकारको नियत के देखिन्छ भने बाहिरचाहिँ आफूमाथि आएको चौतर्फी विरोधका कारणले गर्दा वार्ताको कुरा गर्ने तर, भित्रबाट हामीलाई उत्तेजित पार्नका लागि दमन गर्ने देखिन्छ । सरकारको असफलता र चौतर्फी आलोचनाको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा त्यसलाई विषयान्तर गर्ने नियत सरकारको देखिएकाले अहिले हाम्रो वार्ता पार्टीको मूल कार्यसूचीमा छैन । तर, परीआए पछि नहट्ने नीति छ ।
पहिले वार्ताका नाममा आफ्ना नेता, कार्यकर्ता छुटाएपछि छलफलमा आउनुभएन भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ नि ?
होइन, होइन । एउटा भ्रम के छ बाहिर भन्नुहुन्छ भने त्यतिवेला हाम्रा कार्यकर्तालाई सरकारले छाडेको होइन । स्वयम् म पनि त्यतिवेला ९५ दिन हिरासतमै थिएँ । हामीलाई अदालतले छाड्ने, सरकारले गिरफ्तार गर्ने गथ्र्यों । त्यसपछि चाहिँ अदालतले छाडेपछि हामीलाई राज्यले गिरफ्तार गरेन । तर, मुद्दा खारेज पनि गरेन ।
हामीलाई सोझै हिरासतबाट राज्यले फलानोलाई छोड् भनेर कोही पनि हाम्रा नेता, कार्यकर्ता हामी छुटेनौं । हामी यो राज्यको अदालती कानुनको प्रक्रियाअनुसार छुटेका हौं । तर, राज्यले हामीलाई राजनीतिक हिसाबमा छाडेको होइन ।
त्यसकारण पहिलो कुरा, हामीलाई धोका दियो भन्ने भ्रम जुन सुनिन्छ, त्यो गलत हो । दोस्रो, त्यतिवेला पनि सरकारले छाड्यो या सरकारले छाडोस् भन्ने हाम्रो कुरा थिएन । हामी आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनमा अडिक नै थियौं । प्रतिवद्ध नै थियौं । अहिले पनि हाम्रो कुरा के हो भने अदालती प्रक्रियाबाट छोड्ने र सरकारले छाड्यो भन्ने भ्रम राख्नुहुँदैन । अहिले पनि अदालतले छाडिरहेको छ । तर, सरकारले गिरफ्तार गरिरहेको छ ।
यदि सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने हो भने सरकारले एउटै राजनीतिक निर्णय के गर्नुपर्‍यो भन्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई छाड्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्‍यो नि त । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर हामीलाई छाडेको भए सरकारले हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको भन्ने कुरा हुन्थ्यो ।
अर्को कुरा चाहिँ त्यतिबेला के भयो भने सोमनाथ पाण्डेजीको नेतृत्वमा जुन वार्ता समिति बन्यो, त्यसले सोलोडोलो संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट आन्दोलन गरिरहेका समूहहरु भन्यो । तर, हामी समूह होइनौं, हामी पार्टी हौं । हामीले स्पष्टरुपले संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैनौं भनेका छौं । बाबुराम र प्रचण्डले गरेको आत्मसमर्पण हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
शान्ति प्रक्रिया नेपालमा निस्कर्षमा पुगेको छैन । माओवादीले उठाएका एजेण्डालाई यो संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसकारण हामी माओवादी आन्दोलनकै प्राधिकारका रुपमा, निरन्तरताका रुपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं भनेर हामीले स्पष्ट राजनीतिक घोषणासहित के भनेका छौं भने दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प हाम्रो अहिले वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो मूल राजनीतिक नारा हो ।
जतिवेला हामी जनयुद्धमा जाँदा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विकल्प, नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेर गएका थियौं, अहिले हाम्रो नारा के हो भन्दा दलाल संसदीय पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक पुँजीवाद । त्यसैले हाम्रो स्पष्ट नारा र राजनीतिक एजेण्डा छ र यसमा राज्यले छलफल गर्न तयार भयो भने वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । अहिलेको हाम्रो यो घोषित नीति हो ।
तपाईंकै केही नेताले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव प्रेमकुमार राई फेरिए पार्टी वार्तामा जान्छ भनेका छन् नि ?
होइन । यो प्राविधिक कुरा भयो । यो सरकार गयो, ऊ सरकार आयो भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं । किनभने अर्को गृहमन्त्री आएपछि गृहसचिव आए पनि गर्ने त्यही हो फेरि पनि । त्यसो हुनाले मूल कुरा राजनीतिक एजेण्डा हो । नेपालको दलाल पुँजीवाद अहिले संकट र समस्या ल्यायो ।
भनेपछि, संविधान नै खारेज हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो त ?
होइन, खारेजको कुरा छैन । राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा लगौं । जसरी पहिले ७ दल र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्समा देश अगाडि बढेको थियो, अहिले यो संसदीय पुँजीवादले पनि केपी र प्रचण्डको असफलताले व्यक्तिगत असफलता वा पार्टीगत असफलता होइन, सिस्टमको असफलता हो भन्ने हाम्रो कुरा छ ।
दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कारण यो व्यवस्थामा कांग्रेस गए पनि वा कुनै कम्युनिष्ट नामका शक्ति गए पनि असफल हुन्छन् । किनभने, व्यवस्था नै असफलता हो यो । त्यसकारण यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गरौं । यो राजनीतिक प्रणालीको विषयमा छलफल गरौं भन्ने कुरा हाम्रो हो । र, यो सरकार वा यो व्यक्ति वा यो मन्त्री वा यो व्यक्ति भन्ने सवाल हाम्रो पार्टीका होइन कि हाम्रो मूल कुरा राजनीति प्रणालीको विषयमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौं ।
तपाईंहरुको पार्टीभित्रै पनि फुट आएको सार्वजनिक भइरहेको छ । महासचिव विप्लव र प्रकाण्डजीको बीचमा फाटो छ भन्ने छ नि ?
यो सतप्रतिशत गलत हो । कार्यशैलीगत हिसाबले कतिपय असहमति रहने कुरा वा काम कारबाहीमा केही फरक पर्ने विषयहरु चाहिँ हुन सक्छन् । तर, पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिलाई बिर्सेर वा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हाम्रो राजनीतिक अभिष्टमा पार्टीभित्र कुनै, कतै अन्तर र मतभेद छैन ।
यो कुरा के हो भन्दा खेरि एकातिर दमनमार्फत हाम्रो पार्टीलाई सिध्याउने र अर्कातिर हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरविरोध छ भनेर प्रचार गर्दिने र अनावश्यक हल्ला गरेर सिध्याउने, योचाहिँ विपक्ष, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भ्रम हो । प्रचार हो । किनभने, अहिले उनीहरु के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीलाई दमन गराउने र आत्मसमर्पण गराउने । दोस्रो कुरा, जेल हाल्ने र इन्काउन्टरका नाममा सिध्याउने । योचाहिँ राज्यले आफ्नो हतियार बनाउन खोजेको छ । राजनीति हिसाबले हामीलाई के गरिरहेको छ भने पार्टीभित्र अन्तरविरोध हाल्दिने र हामीलाई पार्टीभित्र पनि सिध्याउने । भित्र र बाहिरको दुवै लडाइँ, साम, दाम, दण्डभेद, यो पुरानो पुँजीवादी सिद्धान्तअनुसार हाम्रो पार्टीमा अन्तरविरोधको कुरा हाल्दिएको कुरा हो । तर, प्रचार भएको जस्तोचाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र कुनै विप्लव वा प्रकाण्ड लबी भन्ने कुरा छैन ।
तपाईंहरुको आन्दोलनको प्रारुप कस्तो हो ? हतियारसहित युद्धमा होमिने हो कि… ?
होइन । हामीले हतियार उठाउँछौं पनि भनेका छैनौं । हाम्रो कुरा के थियो भन्दा खेरि हतियारको बलले जसरी दलाल पुँजीवादको अवशेष थुपारियो, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नजाँदै माओवादीको हतियारलाई व्यवस्थापन नगर्दै वा एजेण्डालाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन नगर्दै एकलौटी पुँजीवादी व्यवस्था फर्काइयो । हामी माओवादी आन्दोलनकै उत्तराधिकारी शक्ति हौं र माओवादी आन्दोलनकै निरन्तरतामा छाैं भनिसकेपछि अब हामी हतियारबद्ध र शान्तिपूर्ण आन्दोलन दुवै कुरा हुन्छ ।
हाम्रो अहिले एकीकृत जनक्रान्तिको मुल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामी युद्ध होइन, क्रान्ति चाहन्छौं भन्ने कुरा हो । मूल कुरा क्रान्ति हो, युद्धचाहिँ विवशता र बाध्यताको विषय हो । जसरी अहिले प्रश्न गर्नुभयो नि भोजपुरबारे, आक्रमण गर्न हामीलाई बन्दुक लिएर आउँदा त्यसको प्रतिरोध बन्दुले गर्ने, लठ्ठी लिएर आउँदा लठ्ठीले गर्ने, राजनीतिकरुपले आउँदा राजनीतिक रुपमा गर्ने भन्ने कुराचाहिँ जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिने हाम्रो पार्टीको नीति हो ।
त्यसकारण, अहिले पनि क्रान्तिको वातावरण तयार पार्न खोज्यो र हाम्रो प्रतिबन्ध हटायो भने, हामीमाथि दमन हटायो भने हामी ठूला आमसभा गरेर ठूला जुलुस गरेर खुला राजनीतिक आन्दोलनमा आउन त हामी तयारै छौं त ।
विप्लव नेकपा र सरकारवीच विभिन्न चरणमा वार्ता हुन थालिसकेको चर्चा चलिरहेका बेला अनलाइनखबरले विप्लव नेकपाका पोलिटव्युरो सदस्य ओम प्रकाश पुनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।